Chiso Chitsva cheKutsvaga Injini Kugonesa | Martech Zone
Vaverengi veblog redu vanoziva kuti isu takave hombe vatsoropodzi veinjini yekutsvaga pamusoro pegore rapfuura. Fuzz Imwe yaisa pamwechete iyi inoshamisa infographic, Chiso Chitsva cheSEO: Kuchinja kwakaita SEO, iyo inoputsa yega yega marongero ekare, uye ichifananidza nemaitiro matsva.
Pamwedzi gumi nesere yapfuura, SEO maitiro pamwe neiyo SEO nzira yakachinja zvakanyanya. Ipo SEO ichiri yakadzika midzi seyambiro yehunyanzvi, iro rakakosha degree reSEO riri kutarisa zvakanyanya nekuwedzera kune yekugadzira uye yekushambadzira pfungwa inobata tsinga dzevanhu KANA vateereri kuti injini dzekutsvaga dziri kuita nani pakunzwisisa. MaSEO ari kutanga kufunga nezvevateereri vavo kutanga nekuita zvemukati zvisati zvagadziriswa zveinjini dzekutsvaga.
Ndokumbira utore nguva yekuverenga kuburikidza neiyi infographic uye uienzanise neyako yazvino zano. Kana iwe uine SEO yakasimba kana chipangamazano izvo zvichiri kusundira iwo maitiro ekare, ungangoda kufunga nezvehukama hwako.
Tags: Content Marketingchinobatanidza-kuvakasearch engine optimizationSearch Engine Optimizationnzira dzekutsvaga injini dzekutsvagaTsvaga Kutengesaseoseo mazanonzira
Kunle Campbell - Fuzz Imwe
Dec 5, 2012 pa 9: 38 AM
Kutenda kuzhinji kwekutaurwa kwaDouglas - takazviisa pamwe chete senzira yekudzidzisa vatengi vedu nezvekuti SEO yakaomarara sei sehurongwa uye kuti iri kuzadza sei dzimwe nzira dzekushambadzira kwedigital.
Unoda timu pamwe nehurongwa hwekudyidzana kuti ubudirire pawebhu.
Dec 5, 2012 pa 10: 32 AM
Izvi zvinonyatsobatsira… Ndakaverenga yakawanda SEO mablogiki nezve nyowani SEO maitiro uye matekiniki asi iyi ndiyo yakanyanya-yakaratidzwa-uye inonzwisisika blog post nguva dzose .. Thanks
Zvita 9, 2012 na11: 29 PM
Yakakura infographic, inobatsira kwazvo, kunyanya kune vanotanga kune yekushambadzira nyika uye vachiona vanhu vazhinji vachidzidzisa yakaipa SEO matekinoroji.
Dec 18, 2012 pa 8: 52 AM
Iyo infographic inokodzera kune wese anotanga kana nyanzvi, nekuti inofananidza mabhesheni eSEO nenzira iri nyore-inonzwisisika uye yakajeka. Iyo fomati ngatitore isu tifunge zvese zvatinofanira uye zvatisingafanirwe kuita. Iyo yakapusa uye inonzwisisika kuenzanisa inoita kuti ini ndiongorore zvandinoziva nezve SEO uye kuti zvinobatsira sei nzira dzekare dzave ikozvino. Maitiro akanaka akachinjwa, saka ndinofanira kushandura marongero angu ekushambadzira saiti yangu $ earch Kana vatengesi nemakambani vakasabudirira kugadzirisa, vari kurasikirwa nemakwikwi. Asi kare kukwikwidza hakusi kwekuti "yako saiti ioneke kumusoro kwezvinotsvaga injini nekuda kwemazwi akakosha kana zvirevo" asi nekuda kwekugadzira "zvemhando yepamusoro zvemukati zvinosangana nezvinodiwa nevaverengi".
Hei Douglas, iyi ndeimwe yeakanakisa infographic. Ndakaverenga zvakawanda seo zvinhu zvekuvandudzwa kweiyo seo, asi ndinonyatsoda izvi, nekuti kuburikidza neiyi infographic, ndiri nyore kuziva nezve akasiyana pakati peyakare uye nyowani seo updates. Kutenda Douglas nekugovana iyi hukuru infographic.
Zvikuru! Iyo yega infographic inotaridzika sosi sosi yekuziva iyo nyowani kumeso kweSEO. Douglas, iwe wakanyatsoratidza kugona kwechokwadi mune ino sosi. Zvakanaka chaizvo.
Sep 5, 2013 pa 1: 16 AM
Hei Douglas, Akanaka infographic. varume vazhinji vanogona Kuvandudza zano nyowani asi iyi iri nyore uye iri nani pane kune imwe.
IOS APP Kuvandudza
Dec 17, 2013 pa 6: 26 AM
chii chakakura zvemukati chaizvo chishamiso ichi chakasarudzika inoshamisa yakakura infographic chaizvo nekuda kwekugovana
Jan 3, 2014 pa 8: 13 AM
Infographic yakanaka, mifananidzo …………………………
Jul 13, 2016 pa 2: 06 AM
SEO yakanyatso shandurwa izvozvi mazuva. Iwe unofanirwa kushandura zano rako rekukwirisa yako saiti mune akasiyana ekutsvaga injini uye zvakare yanhasi nyika masocial media masaiti akakosha kwazvo kune yako saiti. Aya matipi ari pamusoro anonakidza kwazvo. Kutenda nemazano akanaka kudaro uye anobatsira.